juin 2017 - Page 2 sur 64 -
Mpamonjy voina : Sambany vao hisy vehivavy
30/06/2017 admintriatra 0
Araka ny efa tapaka tao anatin’ny filankevitra monisipaly sy ny mpanantanteraka ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra volana vitsy lasa izay, hisy ny fampidirana mpamonjy voina miisa 50 anatiny sy ivelany izay hapetraka manerana ny boriborintany …Tohiny
2013 – 2016 : Tsy namela ho irery ny faritra atsimo ny fanjakana
Kere. Telo taona izay no nisian’ny haintany antsoina hoe « El Nino », izay namely mafy ny faritra Atsimo sy Atsinanan’i Afrika, ka tsy afa-bela tamin’izany ny Atsimon’i Madagasikara. Nianjadian’izany ny tany Androy, Anosy ary ny tany …Tohiny
Fitsarana eny Anosy : Miahiahy sahady ireo manan-draharaha
Koa satria efa eo am-pelatanan’ny mpitsara ny fitakiana izay takian’ny sendikà dia miahiahy sahady ireo mpila raharaha eny amin’ny tribonaly, satria dia hiroso amin’ io fitokonana faobe io izany ireo mpitsara hoy ireo izay nanontaniana. …Tohiny
Ambohibao : Voatafika ny PDGn’ny Conforama
Notafihana dimy lahy tsy nisaron-tava ary nitondra antsy sy basy kilalao ny trano fonenan’ny PDGn’ny orinasa Conforama tamin’ny alarobia 28 jona lasa teo, tokony ho tamin’ny 04 ora maraina. Tao amin’ny fokontany Antanamohatra, kaominina ambanivohitr’Ambohibao …Tohiny
Jeneraly Andrianjaka Njatoarisoa : Voatendry ho kaomandin’ny zandarimariam-pirenena
Taorian’ ny filankevitry ny minisitra notanterahina omaly no nanendrena ny kaomandy vaovaon’ ny zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Andrianjaka Njatoarisoa, izay misolo toerana ny jeneraly Jean de Dieu Ramiandrisoa. Ny Jeneraly Andrianjaka Njatoarisoa moa raha tsiahivina dia ...Tohiny
Sekoly tsy miankina eny Anjanahary : Nofelahina sy nampandohalihina ireo mpianatra